Dagaalyahan ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo muuqday maxk... | Universal Somali TV
Dagaalyahan ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo muuqday maxkamad ku taal Kenya
Ciidanka Amniga Kenya ayaa gacanta ku dhigay la tuhme ka tirsan ururka Al-Shabaab oo laba sano kadib dib ugu laabtay gudaha dalkaasi sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka la dagaalanka Argagixisada Kenya oo loo yaqaan ATPU-da.
Shacabka ku dhaqan magaalada Isiolo ee dhacda bariga Kenya ayaa ku wargaliyay soo laabashada Fu,aad Cumar Macalim laamaha amniga ka hor inta aan gacanta lagu Dhigin.
Baaritaano hor dhac ah oo ciidanka u gudbiyeen maxkamada ayaa lagu sheegay in Fu,aad sababta ka danbeysa dib u laabashadiisa ay tahay sidii uu dhalinyarada ugu dhiiri galin lahaa ku biiritaanka ururka Al-Shabaab.
Dhanka kale maxkamada magaalada Isiolo ayaa diiday talaadada maanta ah in damaanad lagu sii daayo la tuhmahaan, waxaana ay aqbashay codsi ugu yimid ciidanka la dagaalanka Argagixisada oo ahaa in waqti dheeri ah la siiyo si baaritaanka ay u kaamil Yeelaan.
Mr Fu,aad oo ah wiil dhalinyaro soomaali ah ayaa sheegay in uusan ku biirin shabakadaha Argagixisada balse uu laba sano waardiye ka ahaa dalka Qatar.
Kan-xigaDiyaarad Gargaar siday oo ka degtay m...
Kan-horeDiblumaasi ka hadlay sida xal looga g...
55,186,653 unique visits